I-Semalt Ithetha Kwi-Anchor Text Over-Optimization
Ukwakha ezininzi izikhonkwane ezijoliswe kwizithuba zakho zingakunqumla umkhankaso wakho we-intanethi, ungakhankanyi ukuchaphazela izikhundla zakho. Ngokuqhelekileyo, ukulungiswa komsebenzi kubhekise ekuveleni izixhumanisi ezininzi kunye nenani elijoliswe kuyo yombhalo wokubambisa apho iinqununu zithatha ixabiso elithethiweyo lomxholo kwaye azikwazi ukubonelela ngexabiso.
Ukwenziwa komgangatho wokubhaliweyo kwimixholo yinto ehlaselayo iindatshana iminyaka emininzi isebenza. Abacebisi bezeNtengiso, abanikazi be-intanethi ye-yorhwebo, kunye nabathengisi bokuqukethwe bathambe ukudala izixhumanisi ezininzi ezijoliswe kwiiwebhusayithi zabo, imeko ekhokelela kwizikhundla eziphantsi kwiimpawu zokuqulunqa. Ukwandisa intsebenziswano yakho yomsebenzisi kunye nokubeka phezulu kwi-algorithms, cinga ukudibanisa iphepha lakho lomkhiqizo kunye namaphepha endidi ngokufanelekileyo - black fedora hat mens fashion.
Nantsi ingxelo ehlalutyiweyo yewebhusayithi ye-e-commerce. Le ngxelo ibandakanya i-anchor ematheksthi angama-31 emveliso yamaphepha kunye namaphepha angama-28 endidi. Xa kuziwa ukuthengiswa kokuqukethwe , ukuqonda iimpawu ezisisiseko zombhalo we-anchor kubaluleke kakhulu. UFrank Abagnale, u-14 (Semalt uMphathi weNtuthuko yomThengi, unika ukuba ukhange izibalulo ezilandelayo eziza kukunceda ukuba uhlalutye ukuba i-link ene-anchor itekisi ifanelekile.
Igama leBrama - Kwiimeko ezininzi, igama lomtsalane liboniswa njengombhalo we-anchor
I-URL - Hlola ukuba ikhonkco inombhalo we-anchor wangempela, okanye i-URL kuphela
I-Branded - Hlola ukuba uphawu lucacisiwe kwiphepha le-anchor
Ii-Vs ezijoliswe kuko. Iingxelo zeAnchor ezijolisiweyo
Kwingxelo ebandakanya iphepha lama-28 kunye namakhasi omveliso angama-31, i-34.6% yezikhonkco ezikhompyelweyo zijoliswe..Ngamazwi alula, ii-anchors ezifanayo zirekhodwe kwi-18.05%, i-URL kwi-17.88%, uphawu kwi-30.84%, ibinzana kwi-16.58%. Iibhalo ze-anchor ezingajoliswanga zibhaliswe kwi-16.64%.
Kule meko, ukuhanjiswa kwombhalo we-anchor ojoliswe kuyo kunye nesicatshulwa esingajoliswanga. Amaphepha omkhiqizo akhupha amaphepha omxholo malunga neengqamaniso zamagama kunye neefayili ezifanayo. Ukusabalalisa kubonisa ukuba iqhosha lomdlalo lidibanisa, kunye nezikhonkco ezifanayo ezibhalwe kwipesenti ezibhalwe kwipesenti zenyuka zifikelela kwi-4% kunye ne-7% ngokulandelanayo.
Xa kuziwa kumaphepha omhlathi, ukudibanisa amabinzana amahle kunye namagama angundoqo kuya kuba mncinane. Izibalo zibonisa ukuba i-25% yezidalwa ezidalwe kwiphepha lamacandelo zijoliswe kuwo. Ngokomzekelo, 'enye,' ibonisa ukusabalaliswa kweteksi engaphelelwanga. Njengoko kuthelekiswa nokusabalalisa okubhaliweyo kwee-anchor, i-URL ye-URL kunye ne-branded ibhaliswe i-percentage increase of 7% kunye ne-5% ngokulandelanayo. Uninzi lwentlawulo egciniweyo lubhaliweyo ngegama elingundoqo kunye namagama. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba udidi lomdlalo werhwebo lubhaliswe ukusasazwa okufikelela kwi-12.23%.
Impembelelo yokuphucula ngaphezulu kwiprojekti yakho ye-intanethi
Ukuvelisa izixhumanisi ezininzi zomxholo wakho kuphazamisa amanqanaba akho. Njengomthengisi, qwa lasela itekisi yokwandisa i-anchor kunye nokunciphisa inani lezonxibelelwano ezijoliswe ekujoliseni ukukhangela i-market target target .
Ukubaluleka kokulinganisela iphrofayili yakho eqhelekileyo akunakunqandwa. Ukuba usebenze kwikhankaso yakho ye-SEO kwaye igama lakho elingundoqo liguqula phantsi, qwalasela ukudala itekisi eyahlukeneyo yokuphucula ukubonakala kwakho kwephulo. Kule meko, igama elithi 'eliqhelekileyo' lithetha intsingiselo eyahlukileyo kumashishini ahlukeneyo. Ukuqhuba uphando ukuchonga itekisi engcono kakhulu ye-anchor yephulo lakho.